Ngụkọta oge nke warara ntọala
Ngụkọta oge nke ihe onwunwe warara ntọala
Ezipụta ụdị nke ntọala
nhọrọ 4 nhọrọ 5
Kehoraizin ahịrị G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vetikal Ogwe V 0 1 2 3 4 5
Ijikọ mkpara Z 0 1 2 3 4 5
Dayameta nke valvụ D
The ọkpụrụkpụ nke mbadamba maka formwork T
Na ogologo nke osisi L
Obosara nke osisi E
Ihe mejupụtara nke ihe
Arọ kwa akpa K
Akpa 1 cubic mita nke ihe F
N'ike-n'ike nke ihe site na ibu ibu
ciment : ájá : anuahade nkume
Tinye price nke ụlọ Akụrụngwa
ciment (kwa akpa) M
ájá (1 ton) P
anuahade nkume (1 ton) B
Board (1 cubic mita) W
Oyiyi akwa (1 ton) N
X - obosara nke ntọala
Y - ogologo ntọala
A - ọkpụrụkpụ nke ntọala
H - elu nke ntọala
C - anya axis nke mmiri
S - nzọụkwụ dị n'agbata ogige
G - Kehoraizin ahịrị
V - Vetikal Ogwe
Z - Ijikọ mkpara
The chọrọ ego ciment maka rụpụta nke otu cubic mita nke ihe dị iche iche na nke ọ bụla.
Ọ na-adabere ụdị ciment, chọrọ ọkwa nke ihe na-emepụta, na nha ma n'ike-n'ike nke fillers.
Gosiri na akpa.
Ọ dịghị mkpa ikwugharị otú ihe dị mkpa imewe nke ụlọ gbakọọ ego nke ụlọ ihe maka ntọala nke ụlọ ahụ.
N'ihi na ndị na-eri a monolithic ntọala na-abịa nke atọ nke uru nke ụlọ ahụ.
Ọrụ a ga-ikwado atụmatụ na ngụkọta oge nke Re n'ụlọ. Enyere gị aka gbakọọ ego nke ihe mkwado, shuttering mbadamba maka ngwaọrụ warara ntọala.
Gịnị ka ị pụrụ ịmụta:
Akara ukwu nke ntọala (ka ihe atụ, chọpụta ihe na-ego nke waterproofing ekpuchi okokụre Re)
Ọnụ ego nke ihe maka ntọala na n'ala slabs ma ọ bụ agbapụtara a Re n'ala (na-aga na-fun, mgbe, ruru elementrị na njehie na multiplication bụ ezughị ihe)
Mkwado - ọnụ ọgụgụ nke valves, akpaka ngụkọta oge nke arọ ya, dabere na ogologo ya na dayameta
Formwork ebe na ego nke osisi na cubic mita na iberibe
The ebe niile na-ebupụta (n'ihi na ngụkọta oge nke waterproofing Re) na akụkụ na-ebupụta na a isi
Tụkwasị na ngụkọta oge nke ndị na-eri ụlọ ihe nke ntọala.
Otu usoro ga-abịarukwa a ịbịaru ntọala.
M olileanya na ọrụ ga-aba uru ndị na-ewu ntọala nke ha aka, ha na ndị ọkachamara-ewu ụlọ.
Hà na nke ukwu nke ciment, ájá na gravel nke na-eme ihe na-nyere ndabara akwụkwọ, dị ka na-atụ aro site Nsukka ciment.
Nakwa dị ka price simenti, ájá, ajịrịja nkume.
Otú ọ dị, ndị mejupụtara nke okokụre ihe bụ ike dabere na size fractions nke gburu nkume ma ọ bụ gravel, ciment ika, ya freshness na nchekwa ọnọdụ. Ọ na-mara na ruo ogologo oge nchekwa ciment tụfuru ya Njirimara, na na elu iru mmiri ciment àgwà-adị njọ ngwa ngwa.
Biko mara na ndị na-eri nke ájá na gravel na-akọwapụtaghị usoro ihe omume 1 ton. Mgbere na-mara ọkwa a price kwa cubic mita nke ájá, anuahade nkume ma ọ bụ gravel.
The òkè nke ájá na-adabere na ya malite. Ka ihe atụ, osimiri ájá dị arọ karịa a ọrụ.
1 cubic mita weighs 1200-1700 n'arọ nke ájá, na nkezi - 1500 n'arọ.
Na gravel na anwụrụ siri ike. Dị ka dị iche iche na isi mmalite 1 cubic mita arọ nke si 1200 ka 2500 n'arọ dabere na nke. Arọ - karịa mma.
Ya mere gụọ na-eri kwa ton nke ájá na ajịrịja nkume, ma ọ bụ i nwere ike na-ezipụta na-ere.
Otú ọ dị, na ngụkọta oge ka na-enyere mara na e mere atụmatụ na-akwụ ụgwọ maka iwuli ihe maka agbapụtara ntọala. Echefula ọzọ waya maka knitting oyiyi akwa, mbọ ma ọ bụ kposara maka casing, nnyefe nke ewu ihe ahụ, na-eri nke ogwugwu onu na-ewu ụlọ ọrụ.